China Automobile plastic akụkụ Manufacturer na Supplier | Meste
Plastic akụkụ maka ụgbọala
Mestech bụ ọkachamara ebu emeputa on injection kpụrụ ụgbọala plastic akụkụ. Anyị na-etinye aka na ebu na ịme ọgwụ nke akụkụ ụgbọ ala nke ihe ndị dị n'ime na mputa, mkpokọta kọmputa, na mkpuchi wdg.
Industrylọ ọrụ ụgbọala bụ nnukwu ezinụlọ na-arụpụta igwe, metụtara ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ akụkụ niile nke igwe na elektrọnik. Akụkụ rọba maka 30% ~ 40% nke akụkụ dị na ụgbọala. Yabụ, akụkụ akpaaka rọba na-etinye oke oke na ụlọ ọrụ ụgbọ ala.
Mestech bụ ọkachamara ebu emeputa na plastic injection kpụrụ akpakanamde Parts. Anyị na-etinye aka na ebu ndị na -eme na ntụtụ nke akụkụ akụrụngwa nke ihe ndị dị n'ime na mpụga mpempe akwụkwọ, kọmpụta kọmputa, na okpu wdg.
Anyị na-akpụzi ebu ma mepụta ngwa ọrụ dị iche iche dị n'okpuru:
Mgbanwe Knobs & Mgbakọ
Ebe obibi na-enweghị ntinye
Njikwa na bọtịnụ Lighting Back
Ihe nkedo & Oche
Fanye Kpụrụ Spacer nkanka
Ọnụ ụzọ eji arụ ọrụ
Ngwa mkpuchi & Mgbakọ
Ebe obibi DVD
Ime ikuku grilles
Central oche armrest
Inye ime ụlọ ụzọ ụgbọ ala
Nche oche oche
Automobile DVD n'ihu ikpe
Akụkụ oriọna ọkụ
Njirimara nke akpaaka akụkụ Ebu:
1 .Nke buru ibu: akuku akpaaka dika ndi na-acho ugbo ala, ndi ozo, ndi nkpuchi, grilles, ibo uzo, oche ndi ozo, nkpuchi ndi ozo di na oke onu ogugu, ya mere odi nkpa nkedo ka odi nkpa. Nke a ga - achọ ka ndị na - akpụzi ọgwụ ahụ tinye ego na igwe ọrụ buru ibu.
2 .Complex elu: akụkụ ya na ebe dị mgbagwoju anya dị mkpa iji igwe dị elu na oke nkenke CNC rụọ ọrụ.
3 .High quality: E nwere ọtụtụ akụkụ na a ụgbọ ala, nke na-ekwekọghị kpomkwem. Ọ chọrọ ọ bụghị naanị nha ziri ezi, kamakwa ọmarịcha mma na ntụkwasị obi. Karịsịa oriọna, ogwe aka na akụkụ ndị ọzọ.
Ebu eruba analysis na-ukwuu na-atụ aro na imewe ogbo. N'ihi na a ogologo gbazee eruba akụkụ akpaaka dị ka ụgbọ ala bumpers na grilles, ngwa nke ebu eruba analysis nwere ike inye kacha gating ngwọta na-ebelata injection ịkpụzi okirikiri, multiple ọkụ nozzles na-arụrụ ọrụ ugboro ugboro.
Ebu ígwè: S136, NAK80, 738H, SKD61, P20, 718, 718H, 2738, 738, wdg.
Plastic ihe: ABS, eyi, POM, PS, ịkwanyere, HDPE, n'úkwù, wdg
Ebu isi: LKM
Onye na-agba ọsọ na-ekpo ọkụ: YUDO, Mold Masters wdg dị ka akọwapụtara.
Standard akụkụ: DME, HASCO, wdg.
Ebu ogwu eji eme paịlị maka ụgbọala
Ndụmọdụ nke ịkpụzi ebu ebu maka ngwa igwe akụrụngwa
1 .Akụkụ akụrụngwa n'ozuzu ọ bụghị naanị chọrọ akụkụ ziri ezi mana ịdị mma dị elu.
2 .N'ihi iji nweta elu elu mma, akụkụ na-adịghị ekwe ka nwere anọ na edoghi / ikuku edoghi na shrinkage akara na n'elu. Ya mere, a ga-etinye usoro nri ọkụ ọkụ iji zere nkuku dị nkọ na-emetụta usoro ahụ na nhazi ahụ.
Anyị na-eji ezigbo mma nchara S136, NAK80 na P20 mee cavities, cores na ntinye nke ebu. Anyị na-emepụta ebu nke ụkpụrụ nke DME, HASCO, MISUMI dịka nkọwapụta ndị ahịa.
Mestech na-arụpụta ngwaahịa sitere na resins ndị eji arụ ọrụ (polycarbonates, nylons GF, PET, PP, wdg) gaa na akụkụ ịchọ mma dịka oghere acrylic na bezels. Secondary arụmọrụ dị ka sonic ịgbado ọkụ na mpe mpe akwa na-eji dị ka mma.
Nke gara aga: Plastic electroplating na agụụ plating
Osote: Mbugharị mbufe mmiri maka ngwaahịa plastik
PC resin injection ịkpụzi
Ugboro abụọ-shot backlit keycaps
Imepụta sirinji ọgwụ plastik